Sidee Sorare u shaqeysaa, kubada cagta adduunka khiyaaliga ah ee ka socota Ethereum - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Sidee Sorare u shaqeysaa, kubada cagta adduunka ee khiyaaliga ah ee ka socota Ethereum
Tag: Dhibcaha oo dhan, NFT, Astaamo aan fungible ahayn, Soorare, Abaalmarinta kaararka, Kaararka Sorare dhifka ah, Kaararka Sorare Super Rare, Kaadhadhka Gaarka ah ee Sorare
Waqtiga akhriska: 6 minuti
Sorare waa ciyaar kubadeed khiyaali ah oo socota Ethereum. Waxaan rabaa inaan qoro dhowr sadar si aan u fahmo sida ay Sorare u shaqeyso, waxaanan u maleynayaa in hage yar uu ka soo bixi doono si loo dhiso kooxdaada oo loo bilaabo.
Haddii kani yahay markii ugu horreysay ee aad khadadkaan akhrisid, si wanaagsan baa loo yimid.
Halkan, bogaggan, waxaan la wadaagayaa fikradaha dunidan crypto Cazoo. Haddii aad jeceshahay nuxurkeyga oo aad wax ku barato aqrinta aniga, waan faraxsanahay. Wadaagidu waa daryeel! Sidoo kale, haddii aad ka fekereyso inaad iska qorto Sorare, samee sidaas adigoo raacaya xiriirkan: soorare.com. Iyo haa, waa xiriir gudbin. Laakiin aniga aamin, waxaad heli doontaa faa iido weyn - gadaal ayaan ka ogaan doonaa.
Marabo inaad iskaqorto lambarkayga? Hagaag tag google oo raadso mid uun!
Sorare waa ciyaar kubadeed khiyaal ah oo ku saleysan xannibaad
Caadiga kaararka Sorare
Maxay tahay inaan haysto kaararka casriga ah ee Sorare?
Sideen ku abuuri karaa kooxdayda Sorare?
Waa maxay Rookie League?
Sidee koox loo sameeyaa?
Goorma ayaa ciyaaraha lagu ciyaaraa Sorare?
Sidee loo xisaabiyaa dhibcaha?
Sidee loo xisaabiyaa Dhibcaha Ciyaartoyda
Maxay yihiin abaalmarinta kulamada todobaadlaha ah ee horyaalka?
Sidee ayuu u shaqeeyaa Sorare? Sorare waxay ka faa'iideysaneysaa caannimada kaararka ciyaaraha kubbadda cagta ee caadiga ah, sida haddii ay yihiin istiikarada adduunka ee Panini, iyo ciyaaraha horyaal ee khiyaaliga ah, taasoo u oggolaaneysa ciyaartoydu inay is dhaafsadaan kaararka midba midka kale, ka qeyb galaan tartamada oo ay ku guuleystaan ​​abaalmarinno. Dhammaantood isticmaalaya NFT, Calaamado Aan Fungible ahayn, ama walxo la ururin karo oo dhijitaal ah.
Ciyaar kubbadda cagta ah oo khiyaali ah oo ku socota xannibaadda Ethereum oo adeegsata NFT, oo si muuqata u muuqata astaamo yar, sidaa darteed leh qiime sii kordheysa.
Fikradda hal abuurka ah ee Sorare, qaabkeeda ganacsi ee gaarka ah, waxay kasbatay taageerada shirkadaha muhiimka ah sida ConenSys, Ubisoft iyo Opta, iyo sidoo kale laydhka cagaaran, iyo runtii ka qaybqaadashada, warshadaha kubbadda cagta adduunka. Xiddiga Barcelona Gerard Piqué waa maalgaliye shirkaddan, inbadan oo kamid ah kooxaha kubbada cagta adduunka ugu caansan ayaa si rasmi ah ugu liis gareeyay ciyaarta.
Tilmaamahan wuxuu sharraxayaa sida loo dhiso koox, looga ganacsado oo loogu guuleysto Sorare, dhammaantood inta lagu raaxeysto faa'iidooyinka shabakad furan oo baahsan.
Abuuritaanka xisaab Sorare waa fududahay.
Waad kuxirantahay cinwaankan, oo waa inaad bixisaa cinwaanka emaylka, lambarka sirta iyo naanaysta (kaas oo noqon doona magacaaga Tababaraha kooxda), ama waxaad ka gali kartaa koonto Google ama Facebook horey u jirtay (caanka ah login bulshada). Maxaad u isticmaaleysaa lambarka tixraaca: maxaa yeelay waxaad heli doontaa kaar dhif ah! Isla markiiba lagu siin maayo, laakiin ka dib markii aad 5 ciyaartoy ka kaxaysatay Suuqa.
Ka dib waxaad codsan kartaa toban kaararka bulshada oo bilaash ah isla marka aad gasho.
Kaarka Sorare waa shey si rasmi ah ruqsad uga heysta aruuriyaha dijitaalka ee ciyaartoyga kubada cagta xilli ciyaareed gaar ah.
Thanks to tiknoolajiyada xannibaadda dhammaan taageerayaasha waxay soo ururin karaan ciyaartoydooda ay jecel yihiin faa'iidooyinka yaraanta la muujin karo (sahay go'an). Intaas waxaa sii dheer, Kaararka Sorare si xur ah ayaa loo isweydaarsan karaa loona isticmaali karaa aduunyada furan ee codsiyada iyo cayaaraha kala duwan: waxaan dhahnay Ubisoft ayaa guursaday mashruuca, sax? Intaas oo keliya maahan, wuxuu kaloo abuuray tartankiisa iyo horyaalkiisa oo laga heli karo Kaararka Sorare. OneShotLeague. Wax kasta oo la ururin karo wuxuu ku raaxeeyaa waxyaabo badan oo ka mid ah astaamaha hantida laga helo xannibaadda: lama koobiyeyn karo ama la xadi karo. Isticmaalayaasha sidoo kale waxay ku raaxeystaan ​​helitaanka kaarka taariikhdiisa dhijitaalka ah oo dhameystiran. Xilliga 2020-21, waxaa jira saddex heer oo gabaabsi u ah kaar kasta oo Sorare ah: Mid gaar ah, Super Raro (10 nuqul) iyo Raro (100 nuqul).
Saddexda heer ee naadir kaarka ah Soorare
Qaar ka mid ah talooyinka pro si loo qiimeeyo lahaanshaha kaarka Sorare:
Doonitaankeeda urursan: Kaadh kastaa wuxuu yeelan doonaa heer u gaar ah oo la jeclaan karo, sidaas darteedna, qiime u leh dad kala duwan (Ciyaaryahan matalaya, lambarka taxanaha, dhalashada, naadiga ...)
Qiimaheeda ciyaarta: Marka lagu daro soo jiidashada la soo ururin karo iyo qiimaha kaarka kasta, waxaa loo isticmaali karaa in lagu ciyaaro. Sorare waxay kuu ogolaaneysaa inaad u adeegsato ciyaartiisa kubbadda cagta adduunka ee khiyaaliga ah ee loo yaqaan 'SO5' halkaas oo aad ku guuleysan karto abaalmarinno toddobaad kasta.
Qiimaha ciyaarta saddexaad: aragtida ugu dambeysa ayaa ah in Kaadhadhka Sorare uu qiimo ku leeyahay ciyaaro badan, kaliya kuma koobna Sorare's SO5 lafteeda. Soorareyaasha horumariya waxay odorosayaan adduunyo ay daabacayaasha kale ee ciyaaruhu ka dhisteen khibrado cusub oo waliba isticmaalaya Kaararka Sorare (eeg Ubisoft, kor eeg).
Markaad isqorto Sorare markii ugu horeysay waad heli doontaa xirmooyinka kaararka caadiga ah (sidaa darteed ma ahan Rare, Super Rare ama Unique), markaad dhammaystirto tallaabo kasta oo ka mid ah hawshooda si fudud oo toos ah.
Kaararka bulshada ee bilaashka ah ee aad hesho ayaa kuu oggolaanaya inaad sahamiso ciyaarta oo aad ku biirto koox ka mid ah League Rookie, League of Beginners: waa horyaal loogu tala galay maareeyayaasha cusub.
The Beginners League wuxuu ku abaal mariyaa maamulayaasha abaalmarinta kaararka ciyaaryahanka ee Common iyo Rare labadaba. The Beginners League wuxuu u oggolaanayaa maareeyayaasha cusub inay u tartamaan 8 toddobaad oo ciyaar ah, waxaadna awoodi doontaa inaad ka qayb gasho horyaalkaas, ama Tababbarka, oo keliya 8 jeer, ka dib waxaad awood u yeelan doontaa inaad ka qaybgasho qaab-dhismeedka qaybta gobolka iyo adduunka. .
Kadib 8 usbuuc oo ciyaar ah, waxaad ka wareegi doontaa xaalada Maareeyaha-cusub-waxaadna u wareegi doontaa Maareeyaha Cusub - waqtigaan oo kale waxaa laga yaabaa inaad ku guuleysatay in yar Kaararka Abaalmarinta Sorare. Waxaad sidoo kale xirxiran kartaa gacmahaaga oo aad u iibsan kartaa ciyaartoy cusub, kaarar cusub, gudaha Suuqa Kala Iibsiga, Suuqa Kala Wareejinta.
Ku biirista Rookie League waxay u dhigantaa ku biirista koox ka tirsan League-ga.
Kooxdu waxay ka kooban tahay 5 boos, dhammaanna 5 waa in la buuxiyo.
Afyare si loo buuxiyo si loogu biiro League on a Soorare
Ugu yaraan 1 Difaac
Ugu yaraan 1 Khadka dhexe
Ugu yaraan 1 weeraryahan
Ma isticmaali kartid isla ciyaaryahanka laba jeer!
Haddii aad ku haysato Kaar Rare kooxdaada ah, waad magacaabi kartaa kabtanka kooxda, oo heli doona gunno dheeraad ah. Dhammaan kaararka waxaa loo dooran karaa inay noqdaan kabtan, marka laga reebo kaararka bulshada.
Marka ciyaartoyda la doorto, kooxdaada si toos ah ayaa loo keydiyaa oo loo dhigaa Liiska iyo Qeybta la soo xulay!
Kaqeyb gasho tartamada kubada cagta ee 'SO5 Fantasy' asbuuc walba oo kasbato uruurino qiimo leh • Sorare
Maaddaama Sorare ay tahay ciyaar kubbadeed khiyaali ah, tartammadu waxay ka kooban yihiin ciyaaro kubbadda cagta ah oo loo qorsheeyay nolosha dhabta ah. Laba tartan ayaa la qabtaa usbuucii:
Laga bilaabo Jimcaha 17.00 UTC ilaa Talaado 04.00 UTC
Laga bilaabo Talaadada 17.00 UTC ilaa Jimcaha 04.00 UTC
Waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka usbuucyada soo socda ee ciyaarta Ciyaaraha Arena ama hal mar saxiixday, markii aad garaacdo badhanka Play.
Dhibcaha khiyaaliga ah waxaa la xisaabiyaa seddex tallaabo ka dib:
Ku Dhibcaha Ciyaaryahanka (HP) adoo adeegsanaya shaxda dhibcaha, yacni dhibcaha waxqabadka ciyaaryahanka garoonka.
Ku Kaarka Dhibcaha (CS) adoo adeegsanaya gunno kasta oo kaar ah (Xilli, Kabtan iyo Gunno Heer)
Ku Dhibcaha Kooxda (TS). Kani waa wadarta wadarta dhibcaha kaarkaaga 5.
Dhibcaha Ciyaartoyda waxaa loo xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo waxqabadka dhabta ah ee ciyaaryahanka inta lagu guda jiro ciyaarta.
Dhibcaha Ciyaartoyda ee Sorare waxay u dhexeeyaan 0 ilaa 100. Bogga ciyaaryahanka, waxaad ka heli doontaa Dhibcaha Ciyaartooda 5tii kulan ee ugu dambeysay Haddii ay dhacdo inaad aragto calaamad DNP, wuxuu u taagan yahay "Ma Ciyaarin", haddii ay dhacdo in ciyaartoygu helo Dhibcaha Ciyaaryahanka ee 0.
Dhibcaha ciyaaryahanka waxaa loo xisaabiyaa sida soo socota:
Dhibcaha Ciyaaryahanka = Dhibcaha Go'aanka ah + guud ahaan dhibcaha (dhammaanba hareeraha), - haddii dhibcaha hareeraha oo dhan ay xun yihiin, 0 ayaa lagu darayaa.
Il goos goos waxay ku saleysan tahay tirakoob saameyn toos ah ku leh natiijada ciyaarta sida gool, caawiye, casaan, iwm ...
Thegoolal dhan Waxay tixgelineysaa dhammaan tirakoobyada muhiimka ah inta lagu jiro ciyaarta, oo aan si muuqata loola socon marka loo eego kuwii loo isticmaalay in lagu xisaabiyo natiijada go'aaminta, laakiin waxay muhiim u yihiin qiimeynta saameynta guud ee cayaartooy ee ciyaarta inta lagu guda jiro ciyaarta.
Wadarta dhibcaha waxay kuxirantahay 0 waxayna ku egtahay 100.
Dhibcaha hareeraha oo dhan waxay ku saleysan yihiin ficilo yar yar oo soo noqnoqda ciyaarta. Way badan yihiin - 39 haddii aad ku darto dhammaan ficillada ilaaliyaha - Sorarena waad ku dari kartaa miiska oo dhan mari.
Haddii Kaarkaagu leeyahay laba kulan usbuuca soo socda ciyaarta, kaliya kan ugu horreeya ayaa la qiimeyn doonaa. Waxaad arki doontaa oo kaliya ciyaarta ku calaamadeysan liiska ciyaaryahankaaga ee usbuucaas ciyaarta.
SAAMAYN KU SAABSAN Saameyn taban
Gargaar Kaarka cas
Ciqaabta loo rogay Ciqaabta ka dhanka ah
Ku keydiso khadka Khalad taasi oo hadaf u noqota kooxda ka soo horjeedda
Ma jiro shabakad la qaatay (Goolhayayaasha kaliya) In lagaaga dhigo 3 ama in ka badan goolal (Goolhayayaasha kaliya)
Rigooradii waa la badbaadiyey
Samatabbixinta daaficii ugu dambeeyay
Tusaalaha saameynta ay dhacdooyinka qaarkood ku yeelan karaan inta lagu guda jiro ciyaarta dhibcaha hareeraha oo dhan Soorare
Waxyaabaha u gaarka ah dhibcaha Sorare intaas kuma eka, laakiin iyagu ma aha mowduuca warqaddani.
Kooxda Sorare waxay ku dhawaaqeysaa abaalmarinta (Kaararka ETH +) ee usbuuc kasta oo ciyaar ah iyo qeyb kasta oo ka tirsan qaybta Cayaarta ee bogga, hoosta cinwaanka Barkadda Abaalmarinta.
Fikradda Sorare waa mid fiican, sidaan qabo. Awoodda haysashada kaararkaas oo la heli karo iyo sidoo kale in lagu isticmaalo deegaanno kale iyo ciyaaro kale waxay fureysaa adduunyo fursado leh. Ma aha oo kaliya ciyaar, laakiin sidoo kale waa goob loogu talo galay in wax lagu ururiyo.
Xaqiiqda ah inay ku xiran tahay shabakadda Ethereum iyo xannibaadda ayaa laga yaabaa inay xaddido soo-gaadhista dadka isticmaala. Laakiin way imaan doonaan, way imaan doonaan….
Kooxda ka dambeysa Sorare waxay umuuqataa karti iyo aqoon, laba amaah-bixiyeyaal waaweyn ayaa aaminay iyaga: Benchmark iyo Accel. Labadan inta badan khalad maahan.
Waxaa jira qorshayaal lagu ballaarinayo barxadda, khariidadda hawluhu waxay hore u maareysaa waddo dheer oo ay ka buuxaan cusboonaysiin. Waxaan ku jirnaa adduun cusub oo xitaa aysan sax ahayn in laga fisho nidaamyo kaamil ah oo aan dhib lahayn: Waxaan hubaa in kooxdu sidoo kale la kori doonto barxadda.
Gabagabadii, waxaad horey uqortay shirkada Sorare? Bilaash iè!
Maqaalka xigtaSorare wuxuu galayaa koox kale, Rafaa-weynta Boca iors